Denmark oo baaritaan adag ku sameyn doonto dadka iyo gaadiidka uga soo gudba Sweden. - NorSom News
Denmark oo baaritaan adag ku sameyn doonto dadka iyo gaadiidka uga soo gudba Sweden.
Dowlada dalka Danmark ayaa maalintii shaley aheyd bilowday baaritaan xoogan oo lagu sameyn doono dadka iyo gaadiidka uga soo gudbo xuduudka ay la wadaagto dalka Sweden.
Denmark ayaa sheegtay in howshan baarista ah looga dan leeyahay in dadka danbiyada ka geysta Sweden, aysan usoo gudbin dalka Denmark, si ay halkaas danbiyo kale uga geystaan ama falal amni daro ay uga abuuraan.
Denmark ayaa awalba baari jirtay gaadiidka uga soo gudbo Sweden ee mara buundada Öresund ama dekadaha, balse waxey markan sheegtay inay sii xoojin doonto.
Arintan ayaa kusoo aadeyso iyada oo dhowrkii isbuuc ee ugu danbeeyay ay magaalada Malmø ee xuduudka Sweden iyo Denmark ka socdeen falal amni daro oo isdaba joog ah. Sabtidii lasoo dhaafay ayay aheyd markii magaalada Malmø lagu dilay wiil dhalinyaro 15 sano jir ah.
Xigasho/kilde: Danmark innfører ID-sjekk på grensen til Sverige
Previous articleWadan meelmariyay sharci ogolaanaya in qofka laga gacan siin karo inuu isdilo.
Next articleShaqaalaha ajnabiga ah oo la isugu daro mushaar la aan iyo hanjabaad joogto ah.
Keydka NorSom Velg måned september 2020 (53) august 2020 (82) juli 2020 (54) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (77) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (61) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (39) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (110) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)